Ramón de la Cruz. The Enlightenment na ndị nsọ | Akwụkwọ dị ugbu a
Ramón de la Cruz. The Enlightenment na ndị senti
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Ndị edemede, Akụkọ ihe mere eme, Aterlọ ihe nkiri
Ramon de la Cruz A mụrụ na Madrid na Machị 28. 1731 ma bụrụ onye nnọchiteanya kwesịrị ntụkwasị obi nke oge Carlos III na ndị Ihe atụ n'etiti. Na, karịsịa, ọ bụ ya kere ụdị ọhụrụ nke sainete, ebe a doro anya Eserese nke Obodo Madrid nke oge ya. Anyị na-enyocha ọnụ ọgụgụ ya na ọrụ ya.
1.1 Banyere Ihe atụ ahụ
2 Ndị nsọ
2.1 Onye Manolo
2.2 Ndị mmụọ ozi ndị ọzọ
Castizo, bụ́ onye a na-akpọ Barrio de las Letras ugbu a, e mere ya baptizim na chọọchị San Sebastián, ndị mụrụ ya bikwa n’okporo ámá Prado, dịdebere Teatro del Príncipe. O nwere nnukwu ọrụ dịka onye ntụgharị ihe ọchị, ọkachasị French. Ọ sụgharịkwara ma megharịa operas Ịtali ma bụrụkwa onye dere tonadillas na zarzuelas.
Banyere Ihe atụ ahụ
Enwere echiche na-emegiderịta onwe ya nke ụfọdụ ndị nkatọ gbasara omume ya n'ebe Ọmụma. Ụfọdụ na-ekwu banyere ihe enweghị nkwado ma ọ bụ ọbụbụenyi nke ndị ode akwụkwọ eserese ndị ọzọ, dịka ọmụmaatụ, Moratin Sr., bụ onye weere ya dị ka onye nnọchianya nke ụlọ ihe nkiri na-ewu ewu na-enwechaghị mmasị. Ndị ọzọ na-ekwukwa otú ahụ e mere ihe atụ n'ụzọ nke ya, ọ bụ ezie na o mesịrị rara onwe ya nye nanị ndị nsọ.
Ma e nwekwara ndị nkatọ chọtara a mmekọrịta Otu n’ime ebumnobi ndị ahụ ndị e sere onyinyo ya na nke Ramón de la Cruz tụpụtara, ebe ọ bụ na ndị nsọ ya, bụ́ ndị ji nrụtụ aka na omume ọma o nyere ha, bụ ụzọ kasị mma isi kwupụta nkatọ omume ọjọọ na omenala ndị ọzọ nke narị afọ nke iri na asatọ.
Na mgbakwunye, mgbe Ramón de la Cruz chịkọtara ọrụ ya niile o nwere n'etiti ndị na-eso ụzọ ya nye ụfọdụ ndị edemede kachasị mkpa dịka Gaspar Melchor nke Jovellanos o Pụọ.
Ha bụ akụkụ nke ahịrị ahụ a ma ama nke nwere ihe ịga nke ọma na narị afọ nke XNUMX. Dị ka ụdị, na ụkpụrụ, ha pụtara otu ihe ahụ dị ka hors d'oeuvres, na site na nke Ramón de la Cruz ha na-agbaso. N'ozuzu, ha nwere a obere mkpirisi, na-enweghị nkata rapaara nke ukwuu, nwere mkparịta ụka n'etiti mkpụrụedemede nwere ihe na-atọ ọchị bụ nke klaasị etiti etiti. N'ezie, na-atọ ọchị adịghị ewepụ ihe karịa ma ọ bụ obere ụda omume. Na uru ya dabere n'eziokwu na ọ bụ akwụkwọ akụkọ mmekọrịta ọha na eze nke oge ahụ.
Ndị senti nke Ramón de la Cruz, bụ́ ndị dere ihe dị ka narị atọ na iri ise, na-adaba n'ọtụtụ akụkụ n'ime ndị e kewara dị ka. ndị nkatọ ma ọ bụ omenala. N'ịkọwa na nke nwere ntakịrị nkọwa zuru oke, ha anaghị abanye n'ime ihe odide ahụ wee lekwasịkwuo anya na eziokwu nke oge ha na-ekwu. Ihe kacha mma bụ na, na-ewere eziokwu ma na-ebufe ya na tebụl.
na ihe odide nke ọ na-ejikarị eme ihe na-emegharịkwa n'ọtụtụ ndị senti. Ya mere, ha bụ:
Fop ma ọ bụ fop: onye na-etinye na omenala French niile, nke etiti ọha mmadụ, na-enweghị ụkpụrụ na onye ọ na-akwa emo mgbe niile.
Majo na maja: megidere nke gara aga, ọ na-anọchi anya ọdịnala autochthonous na ụkpụrụ nke ezigbo mmadụ, nke a na-akpọkwa pimp, onye mpako na onye na-anya isi.
O ji mee ihe: nwa amadi oge.
Mkpakọrịta: ma ọ bụ onye obi na-enweghị uche nke na-akpa ụmụ nwanyị mgbe niile.
Ebe: ihe oyiyi nwere mmetụ aka nke na-egosi na ụmụ nwanyị gbara ya gburugburu na onye dịkwa umengwụ na-ebi ndụ ndị ọzọ.
Ibe: onye na-ekiri ihe odide ndị ọzọ.
Ikekwe onye kacha mara amara na onye nnọchi anya parodic sainete, ebe ọ bụ na usoro ya gụnyere ịrịọ ndị odide: Uncle Matute, nwunye ya, Manolo, La Primilgada, wdg. Ọ na-etinyekwa ọdịiche ahụ n'etiti usoro nkwuwa okwu na ụdị ndị a ma ama, n'ihi na onye ọ bụla na-ekwu okwu na-eji okwu rụrụ arụ gwakọtara na ụda hendecasyllable.
Ọ na-egosikwa ọdịiche dị n'ụdị dike ahụ na ihe oyiyi nke pimp na protagonist ya, Manolo, na isi nzube ya bụ. na-akwa emo n'echiche nke nsọpụrụ.
Ndị mmụọ ozi ndị ọzọ
Ramón de la Cruz mekwara ka ha si na nke ya nweta na-arụrịta ụka ya na ndị ọzọ gosipụtara dị ka Gịnị bụ onye iro gị o Onye na-agụ agụ na-agwụ ike. Ma ọ bụ site na onu ogugu, tụụrụ ime ka ha nyochaa omume ọjọọ nke oge ahụ, dị ka Ụlọ ọgwụ ma ọ bụ ndị nzuzu o Ụlọ ahịa agbamakwụkwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akụkọ ihe mere eme » Ramón de la Cruz. The Enlightenment na ndị senti
Disemba. Nhọrọ nke akwụkwọ ọhụrụ ga-agwụ afọ
Aldous Huxley: akwụkwọ